किन सँधै फुर्तिला देखिन्छन् वामदेव ? यस्तो रहेछ राज - Dainik Nepal
किन सँधै फुर्तिला देखिन्छन् वामदेव ? यस्तो रहेछ राज
दैनिक नेपाल २०७६ जेठ ३० गते १५:३१
काठमाडाैँ, ३० जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले अचेल फुर्सदिला छन् । उनले केही दिन अघि एउटा निजि टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तमा आफू एक वर्षदेखि वेराेजगार भएको बताएका थिए ।
भूमिकाविहिन भएपछि स्वभाविक रुपमा भेटघाटको काम धेरै हुँदैन । उनी मन्त्री वा पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहँदा बिहानैदेखि उनको निवासमा भेट्न जानेहरुको हुल हुन्थ्यो तर, अहिले त्यो निकै कम छ ।
यद्यी, गाैतम स्वयंको भने बिहानी निकै व्यस्त हुन्छ । उनी मर्निङ वाकदेखि ब्यायमसम्म गर्छन् । गौतमले बिहानको समय शारिरीक व्यायाममा खर्चिइरहेका छन् । योग, ध्यान पनि उनको प्राथमिकतामा पर्छ ।
दुई दिनयत उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफूले व्यायाम गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार फेसबुक पेजमा घरमै व्यायाम गरेको फोटो सार्वजनिक गरेका गौतमले बिहिबार मर्निङ वाकको फोटो सार्वजनिक गरेका छन् ।
गौतमले २०६६ सालदेखि नियमित व्यायाम गर्दै आएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । २०६५ सालमा गृहमन्त्री हुँदा मुटुमा समस्या देखिएपछि उनलाई आकस्मिक रूपमा नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । त्यसपछिलगत्तै थाइल्याण्डमा उपचार गराएका गौतम व्यायाम थालेपछि भने बिरामी परेका छैनन् ।
बिहान ४ बजेनै उठेर व्यायाम थाल्ने गौतम त्यसपछि एक घन्टा भैँसेपाटीको घरदेखि मगरगाउँसम्म हिँडे गर्छन् । ६९ वर्षका उनले खानपिनमा पनि ध्यान दिने गरेका छन् । उनको खानामा अन्न र नुन एकदमै कम, सागपात र माछा हुने गर्छ।
हेराैँ थप तस्वीरहरु :
सबै तस्वीर गाैतमको फेसबुकबाट